कानुन व्यवसायीका चुनावी एजेन्डा – नालिश – Nepal America Legal Information Center
संविधानसभा न्यायिक समितिले प्रस्ताव गरेको न्यायिक व्यवस्थाबारे तपाईको धारणा के छ ?
दुनियामा कहीं नभएको प्रणाली हामीकहाँ स्थापित गर्ने दुस्प्रयास हो यो । संसद्ले आफै कानुन बनाउने, त्यो ठीक भए, नभएको आफै जाँच्ने भन्ने कुरै हुँदैन । त्यस्तै कार्यकारीले नागरिकका मौलिक तथा मानव अधिकारविरुद्ध गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्छ । अहिले भएका अधिकारसमेत कटौती गर्ने, कानुन व्याख्या अधिकार संसद्लाई दिने, न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही सिफारिसको अधिकार संसद्मा सुम्पनु शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हो । यो कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई मान्य हुँदैन । यसको सशक्त विरोध हुनेछ ।
न्यायिक भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । कानुन व्यवसायी पनि मुछिएका छन् । रोक्नका लागि के पहल गर्नुहुन्छ ?
अदालतभित्रका समस्यालाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने भन्ने होइन । हामीसँग त्यसका लागि स्पष्ट एजेन्डा छन् । हामी संविधान र कानुनको दायराभित्रै रहेको संयन्त्रबाट यो समस्यालाई हल गर्न सक्छौं । कुनै अन्य बाहिरी संयन्त्रको जरुरी छैन । जो न्यायाधीशले संविधान र कानुन मिचेर फैसला, आदेशहरू गरेको हुन्छ, त्यसको जाँच हुनुपर्छ । कानुनका विज्ञहरू रहेको संयन्त्रले फैसला ठीक भए/नभएको हेरी त्यसैका आधारमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । फैसला अध्ययनबाटै त्यसमा को कसको संलग्नता छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । अहिले त्यसतर्फ केही हुन सकेको छैन । न्याय परिषद् मौन छ । परिषद्ले काम नगर्दा समस्या बढेको हो ।
न्यायालयको छवि सुधार्ने उपाय के होलान् ?
राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तै न्यायालयमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । न्यायालयमा यथास्थिति र अग्रगमनबीच शीतयुद्ध चलेको छ । अहिले जनताले सहज किसिमले न्याय पाउन सकेका छैनन् । ऐन, कानुन गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन भनेजस्तै भएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा छ । त्यो संस्था पवित्र हुन सकेको छैन । पचास प्रतिशत मुद्दा त अदालतमै किनबेच हुनेरहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश स्वयंले भनेका छन् । त्यसमा न्यायाधीश, वरिष्ठ वकिल, कर्मचारीको सञ्जाल छ । नातावाद, कृपावादले बदनामी
कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिंदा न्यायलयमाथि हस्तक्षेप हुँदैन ?
हुँदैन । बरु न्यायालय राजनीतिक विवादको घेराबाट बाहिर हुन्छ । राजनीतिक विवाद संसद्ले नै हेर्नुपर्छ । संवैधानिक प्रश्न जोडिएका राजनीतिक विवादहरू संसद्को समितिले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फरकफरक व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादमा फसेको हो । नियुक्ति र केही सीमित कुरामा व्याख्याको अधिकार दिंदैमा नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालय हुने भन्ने होइन । कार्यकारीले नियुक्ति गर्ने प्रणाली हरेक मुलुकमा छ । नेपालमा नयाँ होइन । न्यायाधीशले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने होइन । त्यसैले अहिलेको न्याय परिषद् काम छैन । त्यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं ।
किनकि त्यो संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यताबाहिर छ । अदालतलाई सरकारी निर्णय, व्यवस्थापिकाका त्रुटिपूर्ण कामको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यसो नगर्नु शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र न्यायालयसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हो । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार, शैली र दृष्टिकोण परिपक्व भइनसकेको मुलुकमा त्यो झन् खतरनाक हुनेछ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा अहिले माओवादीले ल्याएजस्तो न्यायिक अवधारणा छैन । र, अब बन्ने संविधानमा त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पनि हँुदैन । तर, दुर्भाग्य बहुमतका आडमा न्यायिक समितिले पारित गर्‍यो । अदालतलाई ठूला संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दा, कानुन व्याख्याको अधिकार कटौती गर्न दियो भने व्यक्ति-व्यक्तिको मुद्दामा मात्र अदालत सीमित हुन्छ । संसद्मा धेरै अधिकार केन्दि्रत हुँदा त्यहाँ कुनै एक दलको निरंकुशता हावी हुने खतरा रहन्छ ।